कठैबरा करिष्मा ! - Terai Nepal
२०७६ चैत्र १९ गते, बुधबार १८:२४ मा प्रकाशित
करिष्मा मानन्धर । भलै यो नाम अहिलेको पुस्तामाझ उति परिचित नभएपनि पचासको दशकमा उनको चमक–दमक कम थिएन । हिरोइन भनेकै करिष्मा भनेजस्तै । चाहे रुपरंगको हिसाबले होस् वा अभिनयको । सिनेमा र स्क्याण्डलसँगै उनी चर्चाको चुलिमा चढ्ने र ओर्लने गरिरहिन् । त्यही उतार–चढावका बीच आफ्ना सिनेमाहरु दर्शकले धमाधम अस्वीकृत गरिदिएपछि उनले विरक्तिएर देश छाडिन् ।
लामो समय अमेरिकामा बसेर पुनः स्वदेश फर्किइन् । नेपाल फर्किएपछि पुरानै ढर्रामा सिनेमा निर्माण पनि गरिन् । ती पनि चलेनन् । त्यसपछि राजनीतिमा लागिन् । राजनीतिमा पनि पार लाग्ने देखिनन् । अनि सुरु गरिन्, लेखपढ ।
सिनेमा, राजनीति र पढाईको फन्को लगाइरहँदा पनि उनको विवेक छिप्पिएको रहेनछ । ‘पढ्यो पढ्यो पाठ, सोह्र दुना आठ’ । नपत्याए उनले हालै आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्टाटस हेरौं । करिष्मा लेख्छिन्, ‘के भनेको के ? के सेलिब्रेटी ले सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने ? अनि के काम सरकार को ? किन भोट गरेको हामीले ? के हामी धुर्मुस, सुन्तली हौं कि रवि लामिछाने ?? हँ ?? जानुस् तपाईंहरुको भगवानलाई खोज्नुस ! तर, घर बस्नुस ।’
यति दम्भ, अहंकार र कटुताले भरिएको स्टाटस उनले कुन मनोदशामा लेखिन् होला ? त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, उनको स्टाटस हेर्दा लाग्छ, भएभरका सर्वसाधारण नेपाली उनको ढोका अघिल्तिर पुगेर सहयोगको याचना गरिरहेका छन् । हारगुहार गरिरहेका छन् ।
उनले सर्वसाधारणलाई लक्षित तिरस्कारपूर्ण लेखेकी छिन्, ‘के हामी धुर्मुस, सुन्तली हौं कि रवि लामिछाने ? हँ ? जानुहोस् तपाईंहरुको भगवानलाई खोज्नुहोस् ।’